कांग्रेस महाधिवेशनः « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: कांग्रेस महाधिवेशनः
कांग्रेस महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा, कसरी हुन्छ नेतृत्व चयन ?
महाअधिवेशनले १४ पदाधिकारीसहित १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ । महाधिवेशनबाट एक सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री र क्लष्टरबाट ८ जना सहमहामन्त्री चयन हुनेछ ।
श्याम घिमिरेद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा,को हुन घिमिरे ?
काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरले कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमै उम्मेदवार बन्ने घोषणा गर्नुभएको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर घिमिरेले खस आर्य तर्फबाट पुनः केन्द्रीय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय अधिवेशन हुदैछ । वडा, पालिका र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका ६० जिल्लाका १४८ निर्वाचन क्षेत्रमा आज
कांग्रेस महाधिवेशनः अर्घाखाँचीमा यी भए पालिका सभापति
अर्घाखाँची । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत अर्घाखाँचीमा नगरपालिका र गाउँपालिका स्तरीय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा रहेका ६ वटा स्थानीय तहमध्ये तीन वटा नगरपालिकामा निर्वाचन प्रणालीबाट अधिवेशन